UEFA Oo Soo Saartay Shaxda Ugu Fiican Todobaadka Champions League – WARSOOR
UEFA Oo Soo Saartay Shaxda Ugu Fiican Todobaadka Champions League
Xidhiidhka kubada cagta yurub ee UEFA ayaa soo saaray Shaxda ugu fiican todobaadka champions league kadib markii la ciyaaray lugta 1-aad ee wareega 8 dhamaadka tartanka champions league.
Salaasadii iyo Arbacadii ayaa la ciyaaray kulamada lugta 1-aad iyada oo ay kooxo badan gaadheen guulo muhiim u ah waliba hal lug lasii galeen wareega xia ee tartanka champions League.
Xidhiidhka UEFA ayaa soo xulatay 11-kii xiddig ee qaab ciyaareedka cajiibka ah ka soo bandhigay kulamadii salaasadii iyo Arbacadii la ciayaray ee tartanka champions League.
Xiddigaha ay UEFA soo xulatay ayaa ah xiddigaha sida fiican u ciyaaray kulamadii salaasadi iyo Arbacadii laga ciyaaray tartanka ugu xiisaha badan kubada cagta.
Kooxda chelsea oo garaacday Fc Porto ayaa shaxda ku leh xiddigaha ugu badan iyaga oo ku leh 4 xiddig shaxda ugu fiican ee todobaadka champions league.
Kooxda PSG ayaa dhankeeda ku leh xiddigo badan iyaga oo ku leh 3 xiddig halka kooxaha Real Madrid iyo Man City min 2 xiddig ku leeyihiin shaxda ugu fiican champions League.
Kooxda Arsenal oo dib u soo cusboonaysiisay doonistii Wilfried Zaha